ကလေးငယ်များအတွက် ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ - Hello Sayarwon
ကလေးငယ်များ မွေးဖွားပြီးတဲ့အခါ မကြာခဏ စစ်ဆေးရပါတယ်။ ပထမ ၂နှစ်ဟာ သင့်ကလေးရဲ့ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဆရာဝန်ဟာ သင့်ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို စစ်ဆေးဖို့ အချိန်ဇယားဆွဲပေးပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုဟာ မွေးဖွားပြီး ၃-၅ရက်လောက်မှာ စတင်ပြီး ၁လ၊၂လ၊ ၄လ၊ ၆လ၊ ၉လ၊ ၁၂လ၊ ၁၅လ၊ ၁၈လနဲ့ ၂၄လအရွယ်တွေမှာ အသီးသီးစစ်ဆေးရပါတယ်။
စစ်ဆေးမှုတိုင်းမှာ သင့်ကလေး ကျန်းမာသလားဆိုတာ အသေးစိတ်စစ်ဆေးပါတယ်။
တိုင်းတာခြင်း။ ဆရာဝန်ဟာ သင့်ကလေးရဲ့ အရပ်အမြင့်၊ ကိုယ်အလေးချိန်၊ ခေါင်းပတ်လည်ပမာဏ စတာတွေအားလုံးကို တိုင်းတာပြီး ပုံမှန်အနေအထား ရှိမရှိ မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစစ်ဆေးခြင်း။ သင့်ကလေးရဲ့ အပြုအမူတွေကို ကြည့်ရှုလေ့လာပြီး ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှု လမ်းကြောင်းပေါ် ရှိမရှိ သုံးသပ်ပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း။ သင့်ကလေးရဲ့ ပြုမူချက်၊ တုံ့ပြန်ချက်များကို စစ်ဆေးဖို့ မေးခွန်းအချို့မေးပါတယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာများ သုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်း။ သင့်ကလေးကို တစ်ကိုယ်လုံးစစ်ဆေးပါတယ်။ မျက်စိ၊ နား၊ ပါးစပ်၊ အရေပြား၊ အဆုတ်၊ ဝမ်းဗိုက်၊ လိင်အင်္ဂါ စသဖြင်ပ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ငယ်ထိပ်က ဦးဆက်ကြောင်းနေရာကိုလည်း ပုံမှန်ပိတ်ရမယ့် အရွယ်မှာ ပိတ်မပိတ် စစ်ဆေးပါတယ်။
မွေးပြီးစ ၃-၅ရက်။ သင့်ကလေး ကျန်းမာရေး ကောင်းသလားဆိုတာ သိရအောင် အလုံးစုံ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တွင်း ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုဆိုင်ရာနဲ့ ဟေမိုဂလိုဘင် စစ်ဆေးခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
၁လ။ တိုင်းတာခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုစစ်ဆေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားအတွက် ကာကွယ်ဆေး တိုက်ကျွေးခြင်း အစီအစဉ်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
၂လ။ ပုံမှန် အခြေခံစစ်ဆေးမှုများ ပါဝင်ပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေး၊ ရိုတာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ဆေး၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုး၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး၊ ပိုလီယို ကာကွယ်ဆေး၊ တုတ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး စတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိုးခြင်းတွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကလေးအတွက် ပိုအဆင်ပြေအောင် တချို့ဆေးတွေကို ပေါင်းပြီး ထိုးပေးတတ်ပါတယ်။
၄လ။ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းတွေအပြင် သွေးပျစ်နှုန်း၊ ဟေမိုဂလိုဘင် စစ်ဆေးမှု စတာတွေနဲ့ သွေးအားနည်းခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် မေးခိုင်၊ ပိုလိယို၊ တုပ်ကွေး စတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေ ဒုတိယအကြိမ် ပေးပါတယ်။
၆လ။ တခြားလတွေနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းနဲ့ ခံတွင်းကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်းတွေ ပါဝင်လာပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ပထမသွားတွေ ပေါက်လာတတ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
၉လ။ အခြေခံစစ်ဆေးမှုတွေဖြစ်တဲ့ တိုင်းတာခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုစစ်ဆေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမူအကျင့်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းများနဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အမူအကျင့်တွေအတွက် မေးခွန်းတွေလည်း သင့်ကို မေးပါလိမ့်မယ်။ ကလေးရဲ့ လှုပ်ရှားပြုမူပုံတွေ လေ့လာနိုင်အောင် ကလေးကို မြှူခိုင်းတာ၊ ကလေးနဲ့ ဆော့ခိုင်းတာတွေ လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးမှုစစ်ဆေးနည်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။
၁၂လ။ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေလိုပဲ အလုံးစုံ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ဟေမိုဂလိုဘင် စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ ဘီပိုး၊ ပိုလီယို စတာတွေအတွက် ကာကွယ်ဆေးပေးနိုင်ပါတယ်။
၁၅လ။ အရင်အတိုင်း တိုင်းတာခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု စစ်ဆေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အမူအကျင့်ပိုင်း ဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းများ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းများ ပါဝင်ပါတယ်။
၁၈လ။ ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းအပြင် အော်တစ်ဇင်ပြသနာ ရှိရှိ စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ နှလုံးအပေါက်ပါခြင်း လက္ခဏာတွေ့ရရင် တခြားအစီအစဉ်တွေ ဆက်လက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
၂၄လ။ ဒီအရွယ်မှာ အရင်အတိုင်းပဲ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် ဦးနှောက်အမြှေးရောင် ကာကွယ်ဆေးလည်း ပေးပါလိမ့်မယ်။ ခံတွင်း ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း ကိုလည်း ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Healthy checks for babies. http://www.pregnancybirthbaby.org.au/health-checks-for-babies. Accessed April 25, 2017
Baby’ s checkup schedule. https://www.thebump.com/a/new-baby-doctor-visit-checklist. Accessed April 25, 2017
ကလေးကျန်းမာရေးအတွက် အမျှင်ဓာတ်ရဲ့ အကျိုးပြုပုံ